मेस्सी र रोनाल्डो : स्वार्थ पुरा, तर चाहना अधुरै ! - मेस्सी र रोनाल्डो : स्वार्थ पुरा, तर चाहना अधुरै !
मेस्सी र रोनाल्डो : स्वार्थ पुरा, तर चाहना अधुरै !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १७ असार, 02:45:15 AM
काठमाडौँ, १७ असार । समकालिन विश्वका उत्कृष्ट फुटबलर लियोनल मेस्सी र क्रिष्टियानो रोनाल्डो रुस विश्वकपबाट बाहिरिएका छन् ।
एकैदिन एकै चरणको खेलमा पराजय व्यहोरेर बाहिरिएका दुबै जनाको भित्री स्वार्थ भने पुरा भएको छ । तर विश्वकप जितेर एकअर्काविरुद्ध झन् महान बन्ने उनीहरुको चाहना र लक्ष्य भने अधुरै रहेको छ ।
गत विश्वकपमा फाइनल पुगेर मेस्सीको टिम अर्जेन्टिनाले हारेपछि रोनाल्डो खुशी भएका थिए । त्यही मौकामा उनले सन् २०१६ को युरोकप जितेर मेस्सीलाई पछि पारे ।
रोनाल्डोले देशलाई युरोकप जिताएर पोर्चुगललाई रुस विश्वकपसम्म पुर्याए । तर कोपा अमेरिका फाइनपछि सन्यास लिएका मेस्सीले रोनाल्डोलाई देखाउनकै लागि भएपनि सन्यास फिर्ता लिएर अर्जेन्टिनालाई रुससम्म लिन सफल भए ।
रुसमा शुरुमा रोनाल्डो हिट भए । स्पेनविरुद्ध ह्याटिक गरेर उनी मेस्सीभन्दा अघि देखिए । त्यहीबेला मेस्सीले पेनाल्टी मिस गरेर रोनाल्डोभन्दा कमजोर देखिएको भन्दै आलोचना खेपे ।
तर तेश्रो खेलमा रोनाल्डोले पनि इरान विरुद्ध पेनाल्टी मिस गरेपछि मेस्सीसँग बराबरी गरे । यद्यपी व्यक्तिगत प्रदर्शन, गोल र किर्तिमानसँग रोनाल्डो अघि रहे ।
रुसमा पुरा ४ गोलमा रोनाल्डोले विश्वकप र व्यक्तिगत ५१ औँ ह्याटिक पुरा गरे । लगातार चार विश्वकपसम्म गोल गर्ने विश्वकै तेश्रो खेलाडी बने ।
अनि मेस्सीको एक गोलभन्दा ३ गोल बढी गरेर उनले मेस्सीलाई पछारे । तर दुबै जना प्रिक्वाटरफाइनबाटै बाहिरिए । यसमा मेस्सी र रोनाल्डो व्यक्तिगत रुपमा दुःखी भएपनि एक अर्काविरुद्ध खुशी भएका छन् ।
र उनीहरुका फ्यान पनि एकैदिन विश्वकपबाट बाहिरिएकामा खुशी नै छन् । तर सम्भवतः बढ्दो उमेरका कारण दुबैको अन्तिम विश्वकप नै रुस बन्ने चिन्ता पनि बढेको छ ।
समान ५ पटक बालोन डिओर जितेका मेस्सी रोनाल्डोले देशका लागि विश्वकप जित्न सकेका छैनन् । यसमा मेस्सी रोनाल्डोभन्दा पनि पछि छन् ।
रोनाल्डोले गत बर्ष विश्वकपपछि सानो युरोकप जित्दा मेस्सी उपाधि विहिन छन् । मेस्सीले रुस विश्वकपको निराशापछि सन्यास लिन सक्ने सम्भावना बढी छ ।तर रोनाल्डोले अझै केही बर्ष खेल्ने जाँगर देखाइरहेका छन् ।
आगामी दिनमा जे जस्तो भएपनि दुबै जना एकै दिन रुसबाट घर फर्केर दुःखी भएपनि एकअर्काविरुद्धको स्वार्थ पुरा गरेका छन् । तर उनीसँगै विश्वभरका प्mयानहरुले सोधिरहेका छन्, मेस्सी र रोनाल्डो अब विश्वकप जित्न सक्छौँ की सक्दैनौँ ?
यसको उत्तर स्वंयम मेस्सी र रोनाल्डोसँग छैन् । क्लब फुटबलमा भने उनीहरुले कुनै उपाधि जित्न अब बाँकी छैन् ।
२०७५, १७ असार, 02:45:15 AM